Algeria: voarara ny fantsona M6 taorian'ny fanadihadiana - teles relay
Alzeria: voarara ny fantsona M6 taorian'ny fanadihadiana
Nanapa-kevitra ny Minisiteran'ny Serasera Alzeriana fa "tsy hanome alalana intsony" ny fantsom-pahitalavitra frantsay M6 tsy miankina hiasa ao Algeria, ny andro taorian'ny fandefasana fanadihadiana momba ny hetsi-panoherana malaza "Hirak" ao amin'io firenena io.
Tamin'ny fanambarana navoaka ny alatsinainy hariva teo, ny Ministeran'ny Serasera dia miampanga an'ity fanadihadiana ity - mitondra ny lohateny "Algeria, tanin'ny fikomiana rehetra" - an'ny "Makà topy maso ny Hirak" ary novokarin'ny ekipa iray manana fitaovana "Fanomezan-dàlana fitifirana diso".
"Ity mialoha ity dia mitarika antsika hanapa-kevitra ny tsy hanome alalana ny M6 intsony hiasa ao Algeria, na amin'ny endriny inona na manao ahoana", hoy ny minisitera.
Asongadino ho ampahany amin'ny seho "Fanontaniana manokana", ity tatitra 75 minitra ity - horonantsary horonan-tsary narahina "Fakan-tsarimihetsika" - Mampiharihary fijoroana ho vavolon'ny tanora alzeriana telo momba ny hoavin'ny fireneny, noho ny fikomiana tsy mbola nisy toa azy hatramin'ny volana febroary 2019.
Ny krizy ara-pahasalamana dia nahatonga ny fampiatoana ny tsena "Hirak" tamin'ny tapaky ny volana martsa. Mitsikera ny minisiteran'ny Serasera "Fijoroana vavolombelona tsy misy tsirony", de "Ny klika famerenam-bidy indrindra" et "Anecdotes tsy misy lalina".
Hevitra | King Kong Trump, Very ny fihazonana - New York Times
Ny iray amin'ireo mpiorina voalohany amin'ny famotorana, Noor, YouTuber fantatra any Algeria, dia nanazava tamin'ny tambajotra sosialy ny alatsinainy teo fa nanenina izy noho ny fandraisany anjara tamin'ilay fanadihadiana ary diso hevitra "Tsy fahampian'ny matihanina" an'ny fantsona frantsay.
Araka ny fampitam-baovao Alzeriana, "Nisy mpanao gazety Franco-Alzeriana niantoka ny famokarana ilay sarimihetsika, niaraka tamin'ny fanampian'ny" fixer Alzeriana ", nomena alalana diso hitifitra", fandikan-dalàna "mainka iharan'ny sazy henjana".
Mampanantena ny handray andraikitra ara-dalàna amin'ny mpanao gazety ny minisitera "Forgery amin'ny soratra tena izy na ampahibemaso". izany "Tsy kisendrasendra fotsiny fa ireo haino aman-jery ireo, vonona hanatanteraka fandaharam-potoana kendrena handotoana ny endrik'i Algeria sy hanenjehana ny fahatokisana tsy miovaova napetraky ny vahoaka Alzeriana sy ny andrim-panjakan'izy ireo, hihetsika miaraka amin'ny ambaratonga samihafa sy mpanohana", hoy izy.
Raha ny filazan'ny minisitera, ny M6 dia nanolotra fangatahana fankatoavana ho an'ny mpikambana ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipan'ny seho amin'ny 6 martsa 2020. "Fanontaniana manokana", ho an'ny fitifirana fanadihadiana amin'ny "Ny fampiroboroboana ny fampandrosoana toekarena sy fizahantany ao an-tanànan'i Oran, ary koa ny kolontsaina marolafy izay mampanan-karena ny firenentsika".
Fangatahana izay nahazo valiny tsy dia tsara avy amin'ny serivisy an'ny minisiteran'ny Serasera sy ny raharaham-bahiny, hoy izy. Ny fampielezam-peo tamin'ny Mey lasa teo tamin'ny fantsom-bahoaka France 5 an'ny fanadihadiana hafa momba ny tanora Alzeriana sy ny "Hirak" -
"Algeria malalako" avy amin'ny mpanao gazety frantsay sy talen'ny razamben'ny Alzeriana Mustapha Kessous - dia niteraka krizy diplomatika teo amin'i Algiers sy Paris.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://onvoitout.com/
Very tany an-dranomasina, nisidina avy tany Hawaii nankany Filipina ny solaitrabe
Ep 75. Saron-tava, Baomba vy mavesatra ary ny harena very nataon'i Johnny Depp - Video